Misendra olana amin'ny fanafarana sakafonà trondro
Mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny faritra atsinanana ny fiompiana trondro. Mahatratra tantsaha miisa 388 tokoa mantsy no mivelona amin'ny fiompiana trondro eto Toamasina amin'izao fotoana izao. Araka ny vaovao voaray dia mahalany trondro 1 taonina isan'andro ny fandaniana misy eto Toamasina.
Misy ny olana sedraina eo amin'ity fiompiana trondro ity hoy ireo teknisianina eto an-toerana avy ao amin'ny "Tilapia de l'Est". Nanambara moa izy ireo fa hafarana avy any ivelany ireo sakafonà trondro ka ny olana mateti-pitranga dia ny fahataran'ny fivoahan'ny kaotonera ao antseranan-tsambon'ny Toamasina. Maniry fiaraha-miasa amin'ny tompon'andraikitry ny fadi-tseranana moa izy ireo mba hampivoarana mandrakariva ny asa sy mba ahafahan'izy ireo mamaly ny filan'ny vahoaka.
(206) S.Lantomalala : 19-05-2021 - 14:00